Global Voices teny Malagasy » Miala Tsiny Fa Tsy Miteny Anglisy Aho. Sary no Teniko · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2018 7:55 GMT 1	 · Mpanoratra Natali Herrera Pacheco Nandika (en) i Laura, Maud Bénard, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Etazonia, Venezoela, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
Mpivelively daba eny an-dalamben'i Détroit, Michigan, USA (Sary nalain'ny mpanoratra, nahazoan-dàlana ny namoahana azy).
Mety ho sarotra ny hiresaka ny momba ny dikany ny hoe mifindra monina, fa ny fotoana sy ny halavirana dia mahatonga ny sasany hahita tsaratsara kokoa ny dingana fifindramonina toy ny ‘rehetra’ ahitana ampahany tsy voatanisa. Tantara tokana avokoa ny fifindramonina tsirairay avy, fa ireo tantara ireo dia mifandray amina zavatra tsy miankina aminy sy mampitovy aminy amin'ny tantaram-piainana hafa ihany koa. Mety hisy hilàna azy ve ity torohevitra ity ho an'ireo olona mivonona ny handao ny tranony na ho an'ireo efa lasa ? Tsy misy na iray aza teny ho mafy sahaza hanome toky sy torohevitra azy ireo. Tsy misy ny tena vonona ny handao.
Tao amin'ilay Venezoelà nilaozako, tao anatina tantara nifampizarana vondrona olona maromaro izay tsy nangataka fanazavana tamiko aho. Mora novakiana avokoa ny zavatra rehetra : ny fihetsika, ny fahazarana, ny loza, ny lasa sy ny fomba fijery ny hoavy – na dia nanamaloka ny zavatra rehetra aza ny zavon'ny politika tsy marimpototra. Satria feno kifonofono tao anatin'ny hetsika andavanandro ny maha-izy azy ny tsirairay sy ny rehetra, tsy nametra-panontaniana mikasika ny maha-izaho ahy sy ny maha-izahay anay mihitsy aho. Tamin'izany fotoana izany, mbola tsy nahatratra ny haavo mampiraikiraiky hitantsika ankehitriny [es] ny tahan'ny fifindramonina tao Venezoelà, ary ny hevitra ny handao dia mbola nisy pitika fihetsehampo kely : mazava ho azy fa ny handao any lavitra dia midika hoe hiaina tsaratsara kokoa any aminà firenena iray vaovao.
Ireo Venezoeliana nanomboka ity fiainana vaovao an-tsesitany ity tamin'ny 1999 dia tena tsy azon'ireo Venezoeliana nilaozan-dry zareo mihitsy. Ny fitarainan'ireo mpifindra monina mikasika ireo fepetram-piainana vaovaon'izy ireo dia tsy neken'ireo mpiray tanindrazana aminy, izay tamin'izany fotoana izany, nanomboka nijaly ary amin'izao fotoana izao fantatra ho toy ny krizy politika, ara-toekarena sy amin'ny maha-olona ratsy indrindra tamin'ny tantaran'i Venezoela ankehitriny. Noho izany, very zo ny haneho hevitra momba izany ireo mpifindra monina : hamaivanina ny hevitra ara-politikan-dry zareo momba ny fireneny noho ny halavirana ary notsaraina ho tsy azo rasina ireo fahasahiranana natrehiny tao anatin'ny fiovam-piainany. Tafaraikitra tanteraka tao an-tsain'ireo tafajanona tao amin'ny firenena ny finoana hoe manome fepetram-piainana tsy misy fahasahiranana ny firenena vaovao, raha ampitahana amin'ireo izay atrehin'ny Venezoeliana. Ary tamin'izany fotoana izany, tsy nihevitra ny tsikeran'ireto farany vao tonga ireto ireo firenena nandray ireny mpifindra monina ireny ary vao mainka tsy nandray azy ireo ho tena mpandray anjara ara-politika.
Ireo Hafa, ireo zava-misy ivelany sy ireo tontolo tsy afaka hidirana
Tsy nisy fantatro ny zavatra ianteherako ankehitriny fony aho vao tonga voalohany indrindra tao Etazonia tamin'ny fahavaratra 2011. Tamin'izany fotoana izany, tsy nahafantatra zavatra hotenenina afa-tsy zavatra vitsivitsy ivelan'ny teny fifampiarahabana sy ilay fomba fialantsiny amin'ny tsy fitenenana anglisy aho. (Tsy safidy ny hiantso ireo namako tafajanona tany Venezoela mba hanalako ny foko). Mba hametrahana fifandraisana vaovao, nila ny fanampian'ny vadiko aho mba hanoratra, hamaky sy handika ny zavatra lazaiko tamin'ny olona hafa, ary handika tamiko izay notenenin'izy ireo.
Sary nalaina nandritra ny fetiben'ny jazz tao Détroit. Aorian'ity tovovavy ity, izay tsy menatra mijery ny fakantsary, dia misy mpanao fihetsiketsehana ara-pivavahana miresaka momba ny famelankeloka sy ny fibebahana. Mifanohitra tanteraka amin'ilay tovovavy nijanona teo alohan'ny fakantsariko izany sy tonga dia nipaozy tsy nila nangatahana (Sary nalain'ny mpanoratra, nahazoan-dalana ny famoahana azy).
Raha fintinina, tamin'ny faha-26 taonako, lasa tsy nahay nanoratra sady niankina tanteraka tamin'ny vadiko aho mba hifaneraserana. Nivadika ho fihibohako an-trano sy ora maromaro fitokanana tanteraka ilay tahotra. Rehefa miala ao amin'ny firenena niaviany ny olona iray, na ny zava-mitranga tsy misy dikany mety hitranga mandritra ny fifaneraserany amin'io tontolo ivelany vahiny io aza dia mety hisy fiantraikany lehibe hampidina ny maoraly ka hampiroboka ny rehetra ao anatin'ny halalin'ny tsy fandriampahalemana.
Safidy iray misokatra ho anao araka izany ny fiafenana, ary tena izay mihitsy no nataoko nandritra ny fotoana maromaro.
Nandritra ity fotoana fihibohana ity, ny varavarankelin'ny tranoko no lasa fakantsariko tiako indrindra. Nanome ahy fahafahana hanakaiky ireo dinamika sosialy noheveriko tsy azo hidirana ireto fisokafana lehibe eo amin'ny rindrina ireto. Ny ampahany amin'ny fahalianana amin'ny fandinihana ny hafa dia avy amin'ny fanontaniana apetrak'ity fihaonana amina zavamisy vahiny ity. Toy izany koa, manana hery hametraka fanontaniana maro tsy misy valiny ny natioran'ireto valinteny avy amin'ireo fanontaniana ireo.
Eo am-pandinihana, am-panontaniana tena ary am-panehoana hevitra, nahafantatra aho fa samihafa avokoa ireo olona nodinihiko ireo. Raha toa ka ity tontolo feno fahasamihafana ity dia nahomby ary nivelatra, ny maha-izaho ahy kosa dia nihakely. Tsy toa ahy intsony no nahitana ahy, olona avy ao amin'ny tananàn'i Barquisimeto [Venezoela], fa toy ny olona avy any Venezoela. Tafiditra tao anaty sokajy toa sady vaovao no tsy hay takarina mihitsy aza aho : latina-amerikana aho, latina, marika heverina hanehoana ny fahasamihafàna eo amin'ny olona avy any amin'ny Tanin'ny Afo sy ny olona avy ao amin'ny tananàn'i Juárez ao Meksika.
Fa nisy zavatra azoko notsoahina tamin'izany : tonga saina aho fa, toa tena azoko antoka, na ny Venezoeliana avy aty na ny avy any, na ny Amerikana na avy aiza na avy aiza, dia tsy manary ny tantara na ny vokatra avy amin'ny fihaonany amin'ny alalan'ny sary na mpakasary. Zavatra tsapako izany rehefa nanapa-kevitra ny hijanona tsy handinika tamin'ny alalan'ny varavarankeliko aho ary hivoaka voalohany miaraka amin'ny fakantsariko ho namana tokana.
Ary ankehitriny, manaraka ahy foana ilay fakantsary.
Sombin'izao tontolo izao
Misy zavatra mivaona ao amin'ny hoe maka sary tsotra fotsiny. Ilay sary azo no amboara kely azon'ny mpangalatra tsy misy dikany sy malina, lasa tompon'ilay sombin'izao tontolo izao izay tsy nahetsika. Mihakely ny halalaky ny làlana ary lasa zava-dehibe avokoa ny fihetsika rehetra, tsy hahalalana ireo tiako handosirana fotsiny, fa mifanohitra amin'izany, amin'ny fikasana hamory azy ireo, hanangona sy hahatakatra azy ireo ao anatin'ny fitonian'ny alina, rehefa mamerina mijery ny sary azo nandritra ny tontolo andro aho.
Izaho, izay niboka nanditra ny taona maro, dia nahita tampoka ny herimpo hivoaka sy hiatrika ireo olona miaraka amin'ny fakantsariko. Rehefa nanomboka ny namaky aho, tafiditra tao anatin'ny sehatra miaraka amin'ny olona sasany teny an-dalana ny lahatsoratra fohy, lasa lafika na tohana mba hanatsarana ireo sary ireo izany.
Ann Arbor, Michigan (Sary nalain'ny mpanoratra, nahazoana alàlana ny fampiasana azy).
Na tamin'ny naha-voafetra ny fahafahako miserasera aza, tonga manantona ahy haka azy ireo an-tsary ny olona. Ny fananana ity karazana fifehezana ity ao anatin'ny toedraharaha toy izany, izay handihinan'ny olona ahy mivantana tamin'ny masoko avy amin'ity tontolo tsy misy firaharahàna ity, olona izay raha tamin'ny fotoana hafa dia nandalo fotsiny teo alohan'ny varavarankeliko sady tsy nahita ahy, dia tena fomba vaovao hiainana ny maha mpifindra monina. Fandresena kely manoloana ny tsy fandriampahalemana izay tsy maintsy hiainan'ny mpifindra monina rehetra ihany koa izany.
Amin'ny maha Venezoeliana ahy, ary amin'ny alalan'ny fakantsariko, nanorina sarin'i Etazonia aho, ho ahy ary ihany koa ho an'ny fivelomako. Nahafahako nifanerasera tamin'ny fampiasana teny ny fizarana ny sariko, izay niankina kokoa tamin'ny fihetsika noho ny feo .
Tamin'ny fampiasana fakantsary, haiko ny fomba hamakiako azy, ilay tontoloko vaovao. Nianatra niteny, tsy amin'ny teny anglisy na espaniola, fa amin'ny fitenin'ny sary. Ary, ny tena lehibe indrindra, nahay jerena amin'ny maso indray aho. Ny fakantsary no tetezana nahafantarako fa izaho ilay ”hafa” ato amin'ity firenena ity, fa tsara ihany koa ny fahasamihafana ; ka tena tsy misy zavatra tsy azo halaina sary, tsy misy zavatra tsy afaka manamarina ny tsy hitantarana tantara vaovao.
Mba ahitana sasany amin'ireo sary nalain'i Natali Herrera Pacheco, afaka mijery ny Instagram -ny ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/122525/
 ny haavo mampiraikiraiky hitantsika ankehitriny [es]: https://www.vix.com/es/ciudadanos/176679/migracion-venezolana-cuantos-se-han-ido-y-hacia-donde